मलेसियामा फेरि सबै विदेशी यात्रुमाअस्थायी प्रवेश प्रति-बन्ध ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
मलेसियामा फेरि सबै विदेशी यात्रुमाअस्थायी प्रवेश प्रति-बन्ध !
को’भिड को नया भेरिय’न्ट B.1.1.529 अहिले सम्म कै सब भन्दा बलियो भेरि’यन्ट फेला परेको छ। नयाँ भेरिय¥न्टको खोज पछि, खैरीले भने कि मलेशिया स्वास्थ्य मन्त्रालय ले धेरै साव_धानीका उपायहरू लागू गर्ने निर्णय गरेको छ, मलेशियन हरूलाई अब दक्षिण अफ्रिका, बोत्स’वाना, इस्वाटिनी, लेसोथो, मोजा’म्बिक, नामिबिया र जिम्बा’ब्वेमा यात्रा गर्न अनुमति छैन।
B.1.1.529 नाम गरेको भारी उत्परिवर्तित भेरिय’न्टलाई “म्युटेश’नको असामान्य नक्षत्र” को रूपमा वर्णन गरेको छ र यो प्रसारित भएका अन्य भिन्नताहरू भन्दा “धेरै फरक” थियो। पुष्टि भएका केसहरू दक्षिण अफ्रिकाको गौतेङ प्रान्तमा, बोत्सवानामा चार केसहरू र हंग’कंग मा एक (जुन दक्षिण अफ्रिकाबाट सीधै यात्रासँग जोडिएको छ) मा पत्ता लागेको छ।